The Vegan Initiative စျေး - အွန်လိုင်း XVE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို The Vegan Initiative (XVE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ The Vegan Initiative (XVE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ The Vegan Initiative ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ The Vegan Initiative တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
The Vegan Initiative များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
The Vegan InitiativeXVE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000209The Vegan InitiativeXVE သို့ ယူရိုEUR€0.000177The Vegan InitiativeXVE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00016The Vegan InitiativeXVE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000191The Vegan InitiativeXVE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00189The Vegan InitiativeXVE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00132The Vegan InitiativeXVE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00466The Vegan InitiativeXVE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000782The Vegan InitiativeXVE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000279The Vegan InitiativeXVE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000292The Vegan InitiativeXVE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00467The Vegan InitiativeXVE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00162The Vegan InitiativeXVE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00114The Vegan InitiativeXVE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0157The Vegan InitiativeXVE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0353The Vegan InitiativeXVE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000287The Vegan InitiativeXVE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000316The Vegan InitiativeXVE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00652The Vegan InitiativeXVE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00145The Vegan InitiativeXVE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0221The Vegan InitiativeXVE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.248The Vegan InitiativeXVE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0808The Vegan InitiativeXVE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0154The Vegan InitiativeXVE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00579
The Vegan InitiativeXVE သို့ BitcoinBTC0.00000002 The Vegan InitiativeXVE သို့ EthereumETH0.0000005 The Vegan InitiativeXVE သို့ LitecoinLTC0.000004 The Vegan InitiativeXVE သို့ DigitalCashDASH0.000002 The Vegan InitiativeXVE သို့ MoneroXMR0.000002 The Vegan InitiativeXVE သို့ NxtNXT0.0146 The Vegan InitiativeXVE သို့ Ethereum ClassicETC0.00003 The Vegan InitiativeXVE သို့ DogecoinDOGE0.0595 The Vegan InitiativeXVE သို့ ZCashZEC0.000002 The Vegan InitiativeXVE သို့ BitsharesBTS0.008 The Vegan InitiativeXVE သို့ DigiByteDGB0.00717 The Vegan InitiativeXVE သို့ RippleXRP0.000709 The Vegan InitiativeXVE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000007 The Vegan InitiativeXVE သို့ PeerCoinPPC0.000697 The Vegan InitiativeXVE သို့ CraigsCoinCRAIG0.0939 The Vegan InitiativeXVE သို့ BitstakeXBS0.00879 The Vegan InitiativeXVE သို့ PayCoinXPY0.0036 The Vegan InitiativeXVE သို့ ProsperCoinPRC0.0259 The Vegan InitiativeXVE သို့ YbCoinYBC0.0000001 The Vegan InitiativeXVE သို့ DarkKushDANK0.0661 The Vegan InitiativeXVE သို့ GiveCoinGIVE0.446 The Vegan InitiativeXVE သို့ KoboCoinKOBO0.0463 The Vegan InitiativeXVE သို့ DarkTokenDT0.000192 The Vegan InitiativeXVE သို့ CETUS CoinCETI0.595
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:00:02 +0000.